Tiraamp yaa'ii 'Walta'insa Diinagdee Eeshiyaa Paasifiik irratti haasawaa taasisuufi - BBC News Afaan Oromoo
Tiraamp yaa'ii 'Walta'insa Diinagdee Eeshiyaa Paasifiik irratti haasawaa taasisuufi
Goodayyaa suuraa 'Apec' yaa'ii biyyoota dinagdee gurguddaa qaban 21 walitti fidudha
Yaa'iin 'Walta'iinsa Dinagdee Eeshiyaa Paasifiik' (Apec) yoo taasifamutti Tiraampi haasaa taasisan gamanumaan hawwiin eegamaa jira.
Shoora Ameerikaan daldalaa fi guddina naannoo sanaairratti qabdu ilaalchisee ibsa kennu jedhame eegama.
Dhaadannoon isaanii 'Dursa Ameeriikaaf' jedhu fi waliigaltee daldalaa naannoo irraa bahuun isaanii akka daldala bilisaa irraa baqachuutti fudhatamaa jira.
Daladala Chaayinaa fi Jaappaan wal hin simne sirreessuufis waadaa seenanii turan.
Yaa'iin 'Apec' biyyoota 21 qarqara Paasifikiin jiran kan walitti fidu yoo ta'u, kunis Omisha Waliigalaa Biyyaa Keessaa (GDP) adduunyaa % 60 kan ta'u biyyoota qabanii dha.
Tiraampi erga aangootti dhufanii, waliigaltee daldalaa 'Tiraansi Paasifiik Paartinershiippi' kan biyyoota 'Apec' 12 of keessatti qabu keessaa dinagdee Ameerikaa miidhaa jechuun baasanii jiru.
Tiraampi har'a sa'aatii 3:30 irratti haasaa ni taasisu jedhamee eegama. Isaanitti aansuun ammoo pireezidaant Shii Jiinpiing ni dubbatu.
Walga'ii Daa Naangitti taasifamu kanarratti Tiraamp fi Puutiin wal argu jedhamee baay'ee kan eegamaa jiru ta'eyyuu, ammallee hin mirkanoofne.
Gahee haaraa Ameeriikaaf qopheessuu
Waggoota 30'tti dhiyaataniif 'Apec' waltajjii Ameerikaan daldala bilisaa biyyoota dinagdeen guddachaa jiran waliin taasisuun shoora dursummaa taphachaa itti turte dha.
Garuu yaadni Tiraampi Ameerikaaf waliigaltee gaarii argachuu jedhu, dubbii jijjiiraa jira. Waliigalteewwan kana dura Eeshiyaa Paasifiik gidduutti taasifamaa turan waggoota kurnan darbaniif kaampaanota biyyattii miidheera jedhanii amanu.
Walga'ii dursitoonni daldalaa itti argamaniifi naannoo yeroo dheeraaf bulchiinsa Ameerikaa duriitiin haala cimaa ta'een bifa amma irra jiru qabate kanarratti haasaan baniinsaa taasisan shoora Ameerikaan taphachuu feetu ibsuuf Tiraampiif carraa uuma jedhamees eegama.
Garu yaadadhaa, biyyoonni kan biroo karaa ittiin daldala fooyya'aa ta'e Ameerikaa malee itti argatan barbaachaa jiru. Chaayinaan ammoo morkattuun olaantummaa humna waraanaa fi diinagdee Eeshiyaa keessaa, shoora dursummaa diinagdee Ameerikaa fudhachuu akka feetu ifa gooteetti.
'Jechaafi daldala wal simsiisuu'
Kamisarra daawwii Beeyijiingitti godhaniin waa'ee diinagdee guddaa Chaayinaa yoo mari'atan, Tiraamp ''Chaayinaan Ameerikaa irratti haxxee taateetti hin jenne'' jechuun isaanii namoota hedduu ajaa'ibsiisee ture.
Tiraam kana mannaa, ''michummaa daldalaa Chaayinaa waliin ture, qaama tokkoof kan loogu fi kan haqa hin qabne'' jedhanii waamaniif, bulchiinsonni Ameerikaa duraanii itti gaafatamtoota jedhaniiru.
Tiraamp, Shii Jiinpiing Kooriyaa Kaabaa irratti cimsuun akka hojjataniif gaafatan